နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ်ခလုတ် > Rocker Switch
Red Light Illuminated Boat Rocker Switch In Stock တွင် နောက်ဆုံးရောင်းနေပါသည်။
မီးနီပိတ်ထားသော Illuminated Boat Rocker Switch ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် Red Light Illuminated Boat Rocker Switch ကိုဝယ်ယူပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မူအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံမှန်ပေးပို့ချိန်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ။
နမူနာပေးပို့သည့်ရက်စွဲသည် 1-3 ရက်ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုပေးပို့ချိန်: 7-10 ရက်။
ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: 15-20 ရက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ အားသာချက်
2. နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် FBELE၊ အကောင်းဆုံး ဂုဏ်သိက္ခာ
3. ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံ R&D အင်ဂျင်နီယာ
6. စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ကုန်အသစ်များ
မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့၊ အခုချက်ချင်း ကျွန်တော်တို့ကို အီးမေးလ်ပို့ပါ။
hot Tags:: မီးနီပိတ်ထားသော Illuminated Boat Rocker Switch၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်